फ्लेक्सोग्राफी के हो? इतिहास, परिभाषा र आधारभूत विशेषताहरू | अनलाइन क्रिएटिभहरू
ग्राफिक कला ग्राफिक डिजाइन को दुनिया मा धेरै पेश गरिएको छ। यति धेरै मुद्रण कुलको 50% को हिस्सा भएको छ एक डिजाइन परियोजना को टुक्राहरु मा।
यस पोष्टमा, हामी फ्लेक्सोग्राफी के हो भनेर व्याख्या गर्छौं, प्रिन्टिङको एक प्रकार जुन प्रत्येक प्याकेजिङ्ग डिजाइनमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ र त्यो मात्र होइन, तर यो विज्ञापन र मार्केटिङ क्षेत्रको अंश पनि हो। हाम्रो कम्पनीलाई सञ्चार गर्ने र यसलाई अझ गम्भीर र व्यावसायिक तरिकामा प्रोजेक्ट गर्ने तरिका।
यहाँ हामी शब्द वर्णन गर्दछौं फ्लेक्सोग्राफी र हामी यसको विशेषताहरु के बारे व्याख्या गर्छौं।
2 अलि बढी इतिहास
3 लाभ र हानि
5 फ्लेक्सोग्राफी कम्पनीहरू
फ्लेक्सोग्राफी शब्द वा फ्लेक्सोग्राफिक प्रिन्टिङ पनि भनिन्छ, धेरै मध्ये एक हो प्रिन्टिङको संसारमा अवस्थित प्रिन्टिङका ​​विधि र प्रकारहरू। यस प्रख्यात विधिको विशेषता के हो भने तिनीहरूले राहतको रूपमा प्लेटहरूको प्रयोग प्रयोग गर्छन् जहाँ यो विभिन्न सब्सट्रेटहरूमा छापिएको हुन्छ जुन यस अवस्थामा हामी फिल्महरू भनेर चिन्छौं। पलिएस्टर, नायलन, धातु, कागज, गत्ता वा कपडाहरू, जुन कपडाहरू होइनन्।
यो मुद्रण विधि संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रारम्भिक 20 मा भएको थियो तर फ्रान्स सम्बन्धित। पहिलो क्षण देखि पुन: नामाकरण एनिलिन मुद्रण जहाँ त्यस समयमा प्रयोग गरिएको मसी वा साना पिग्मेन्टहरूलाई धेरै महत्त्व दिइयो। दशकौं र वर्ष पछि, यसको नाम परिवर्तन गरिएको थियो जसरी हामी यसलाई आज जान्दछौं, फ्लेक्सोग्राफी।
अलि बढी इतिहास
1890 मा Bibby Baron ले पहिलो मेसिन डिजाइन गरे जसमा कागजको झोला प्रिन्ट गर्न ड्रमको परिधिमा रंग टावरहरूको सहायक मुद्रण सिलिन्डर समावेश थियो। सत्य यो हो कि यस्तो आविष्कार सफल थिएन, तर यो वास्तवमै पहिलो फ्लेक्सोग्राफी प्रिन्टिङ मेसिनको उत्पत्ति मानिन्छ जुन आज हामी बुझ्छौं।
केही वर्ष पछि, 1905 मा, पहिलो flexographic मेसिन पेटेंट भएको थियो कागजको झोलाहरू छाप्ने उद्देश्यले, जसमा रक्सीमा पातलो एनिलिन तेलहरू रङको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। बीस वर्ष पछि, यो प्रक्रिया पहिले नै जर्मनी मा रबर मुद्रण को रूप मा चिनिन्थ्यो।
फ्लेक्सोग्राफी मुद्रण प्रक्रियाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ यो 1905 मा फ्रान्स मा आविष्कार गरिएको थियो Houleg द्वारा। यो एक उच्च राहत मुद्रण प्रणाली हो, जसमा प्लेटका केही क्षेत्रहरू अरू भन्दा उच्च छन् र कागजमा आफ्नो छाप छोड्नेहरू हुन्।
प्रणाली वास्तवमा टाइपोग्राफी द्वारा प्रयोग गरिएको जस्तै हो, भिन्नता प्रयोग गरिएको प्लेटहरूमा निहित छ। टाइपोग्राफीमा प्लेट अधिक कठोर हुन सक्छ, फ्लेक्सोग्राफीमा प्रयोग गरिएको सामग्री, यसको नामले सुझाव दिन्छ, लचिलो र रबरी हुन्छ। वास्तवमा, सुरुमा प्रक्रिया थाहा थियो गमसँग छाप्ने नाममा.
यो हो स्ट्याम्पिङ कन्टेनर र प्याकेजहरूको लागि सबैभन्दा प्रयोग गरिएको विधि। 50 को दशकमा, प्रविधिले परम्परागत एनिलिन प्रयोग गर्नुको सट्टा अल्कोहल र पानीमा आधारित मसीले छाप्ने विकास गर्यो, जुन धेरै विषाक्त थियो। पछि द फोटोपोलिमरहरूमा आधारित प्लेटहरूको प्रयोग रबरको सट्टा, यसको अर्थ प्रविधिमा क्रान्ति भएको छ।
मुद्रण क्षेत्रमा वि. तीन वास्तुकला उपलब्ध छन् जुन एक अर्काबाट फरक छ र प्रत्येकले फ्लेक्सो मेसिनमा समायोजन गर्दछ।
मुख्य हुन्: केन्द्रीय ड्रम फ्लेक्सो प्रिन्टिङ मेसिन, स्ट्याक फ्लेक्सो मेसिन र इनलाइन फ्लेक्सो मेसिनहरू।
यी मेसिनहरू मिलेर बनेका छन्: सही प्रिन्ट गर्ने सुविधा दिने एनिलक्स रोलर, रोलर भित्र आवश्यक मात्रामा पिग्मेन्ट आपूर्ति गर्ने मसीको चेम्बर भएको डाक्टर ब्लेड प्रणाली, प्रिन्टिङ प्लेट जडान गरिएको प्लेट सिलिन्डर, प्रिन्टिङ सिलिन्डर जसमा प्रिन्टिङ प्लेटले यसलाई थिच्दा सब्सट्रेट टिक्छ, र एक मसी प्रणाली।
प्रक्रिया धेरै सरल छ किनकि मुद्रण प्रक्रियाको क्रममा मसी मार्फत पम्प गरिन्छ डाक्टर ब्लेड प्रणाली मसी च्याम्बर को भित्री जुन हामीले माथि उल्लेख गरेका छौं। उक्त चेम्बर भित्र, हामीले एनिलक्स रोलरको सम्पर्कमा हुँदा मसी उठाउने दुईवटा ब्लेडहरू फेला पार्छौं।
यो रोलर सर्छ र घुमाउँछ ताकि यसको सतह सिलिन्डरमा रहेका प्रिन्टिङ प्लेटहरूको राहतसँग सम्पर्कमा आउँछ, यसरी डाक्टर ब्लेडले सङ्कलन गरेको मसीलाई स्थानान्तरण गर्दछ।
यस मुद्रण प्रणालीका फाइदाहरू अफसेट बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने शोषक मिडिया वा कागजमा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।
मेसिनरी कम लागतको छ, अर्थात्, यी मेसिनहरू एकदम सस्तो छन् यदि हामीले तिनीहरूलाई अफसेट र खोक्रो प्रिन्टिङसँग तुलना गर्छौं, र केहि परियोजनाहरूमा समान परिणामहरू प्राप्त हुन्छन्।
यसले दाग गर्दैन वा यसको पछाडि कुनै छाप छोड्दैन किनकि यो छ यसको उच्च राहत बावजुद एकदम लचिलो मेसिन।
प्लेटहरू पनि धेरै सस्तो र सस्तो छन्, यसको अर्थ सामग्रीहरू सस्तो र साना देखि मध्यम कामहरूको लागि प्रभावकारी छन्। यद्यपि, तिनीहरू अझै पनि अफसेट प्लेटहरू भन्दा धेरै महँगो छन्।
तिनीहरूले उत्कृष्ट मुद्रण गति समावेश गर्दछ, यसले प्रक्रियालाई अझ छिटो र सजिलो बनाउँछ।
रंग मा एक निर्धारण स्थिरता छ, त्यो हो, मसी प्रणालीले प्रिन्ट रन भरि रङ नियन्त्रणलाई कायम राख्न अनुमति दिन्छ, जसले यसको प्रजननको निष्ठाको ग्यारेन्टी गर्दछ।
अवशोषक र गैर-शोषक समर्थनहरूमा छाप्न सक्षम हुने बहुमुखी प्रतिभा, सबैभन्दा विविध ढाँचाहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुनुको साथै, उत्पादन लाइनलाई अनुमति दिन्छ। बजार को धेरै विभिन्न प्रकार को सूट।
फ्लेक्सोग्राफीमा अवस्थित धेरै कम कमजोरीहरू छन्, तिनीहरूमध्ये धेरै छन्:
स्क्वाश प्रभाव उत्पन्न गर्दछ जसले इन्टोनेशन र रङ मिलानलाई असर गर्छ।
प्रयोग गरिएको प्लेटको प्रकारको कारणले कम नियमहरू, यसको मतलब छविको गुणस्तर पर्याप्त उच्च छैन।
त्यहाँ विकृति छ किनभने चार-रङ प्रक्रियामा केही सीमितताहरू हुन्छन्।
यस प्रकारको प्रिन्टिङमा सबै भन्दा राम्रो ज्ञात अनुप्रयोगहरू प्राय: सबै भन्दा माथि विभिन्न खाद्य उत्पादनहरूमा देखिन्छन्, अर्थात्, प्रत्येक र्यापरको निर्माणमा। त्यसकारण, हामीले पहिले उल्लेख गरिसकेका छौं, प्याकेजिङ क्षेत्र। यही कारणले हामी सामान्यतया फेला पार्छौं:
र्‍यापिङ र प्याकेजिङ
सेलोफेन वा प्लास्टिक
थप जटिल सामग्रीहरू जस्तै टेट्राब्रिक्स
दूध र पेय कन्टेनर
कागज झोला र प्लास्टिक झोला
कडा कागज बक्सहरू
व्यक्तिगत प्याकेजहरू जस्तै चश्मा र कन्टेनरहरू र लेबलहरू र ब्रान्डहरू।
डिफ्लेक्स सन् १९९५ मा स्थापना भएको र म्याड्रिड (स्पेन) मा रहेको कम्पनी हो। एक सफल कम्पनी हो, जसले छोटो समयमा, कम्पनीले गुणस्तर, स्थिरता, छोटो डेलिभरी समय, उच्च स्तरको सेवा र निरन्तर नवीनताको लागि प्रतिष्ठा कमाएको छ।
यो एक स्पष्ट दृष्टि र नेतृत्व को लागी एक पेशा संग एक कम्पनी हो जसले आफ्नो सफलता को कर्मचारी को अनुभव मा आधारित छ, र यो उत्कृष्ट कार्य सुविधाहरु र सबैभन्दा आधुनिक पूर्वाधार मा लगानी गर्न मन पर्दैन।
एस्कोले एचडी फ्लेक्सोलाई फ्लेक्सो प्रिन्टिंगको संसारमा प्रस्तुत गर्‍यो, र त्यसबेलादेखि कम्पनीहरू ग्रेभर उत्पादनबाट टाढा जान थालेका छन्। फाइदाहरू बेवास्ता गर्न धेरै राम्रो छन्: पहिलो पटक फ्लेक्सो मुद्रण प्रतिद्वन्द्वीहरूको लागि ग्रेभर र लेटरप्रेस मुद्रणको गुणस्तर।
यो राष्ट्रिय फ्लेक्सोग्राफी कम्पनीहरू र सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखलाको लागि साझा प्राविधिक प्लेटफर्म हो, सबै आवश्यक उपकरणहरू प्रदान गर्दछ जसले प्रिन्टरहरूलाई विभिन्न क्षेत्र र क्षेत्रहरूबाट आफ्नो काम गर्न वा सुधार गर्न अनुमति दिन्छ।
यसको वार्षिक प्राविधिक सम्मेलनहरू, प्रशिक्षण, प्राविधिक लेखहरू, नियमित बैठकहरू, मासिक न्यूजलेटरहरू र FTA यूरोप, फ्लेक्सोग्राफिक प्राविधिक संघ, जसले युरोपेली फ्लेक्सोग्राफिक मुद्रण उद्योगको साझा हितहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ, मार्फत जानकारी र ज्ञान प्रदान गर्दै।
1974 मा स्थापना भएको पारिवारिक व्यवसाय रोटोग्राभर फिनामा फिनाको उत्पत्ति भएको छ, उपभोक्ता प्याकेजिङका लागि लचिलो मिडिया प्रिन्टिङमा विशेषज्ञता। आज ठीक छ, उन्नत र अनुकूलित समाधान प्रदान गर्दछ, gravure र flexography मा, प्रमुख खाद्य कम्पनीहरु र अन्य क्षेत्रहरु मा।
थप रूपमा, जर्मनी, फ्रान्स, पोर्चुगल र युनाइटेड किंगडममा निर्यातको साथ यसको महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति छ। नवाचार, अत्याधुनिक प्रविधि र प्रक्रिया उत्कृष्टता, वातावरणको लागि अत्यन्त सम्मानको साथ, फिना दर्शनको कुञ्जीहरू हुन्।
यदि तपाईं पोष्टको अन्त्यमा पुग्नुभएको छ भने, हामी केवल यो थप्न सक्छौं कि हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले धेरै वर्षदेखि प्रयोगमा रहेको र इतिहास रहेको यस मुद्रण प्रविधिको बारेमा थप सिक्नुभएको छ।
अधिक र अधिक कम्पनीहरूले उत्पादनको मुख्य माध्यमको रूपमा फ्लेक्सोग्राफीमा दांव लगाइरहेका छन्, किनकि यो विभिन्न देशहरूमा अत्यधिक माग गरिएको कार्य हो। थप रूपमा, हामीले किनेका धेरै उत्पादनहरू र जुन हामीले दिनहुँ खपत गर्छौं, तिनीहरूको प्रत्येक प्याकेजि or वा र्यापरहरूमा, फरक फ्लेक्सोग्राफी प्रक्रिया गरिएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » फ्लेक्सोग्राफी के हो?